Xildhibaanada & Siyaasihiinta Soomaalida oo Dibadbax Balaaran kadhigaayo Muqdisho”Sababtu maxay tahay? | Calanka Somalia
← 3-sano kadib Maamul xumada ka jirta xafiiska Madaxweyne Shariif !!!!
Xildhibaanada & Siyaasihiinta Soomaalida oo Dibadbax Balaaran kadhigaayo Muqdisho”Sababtu maxay tahay?
March 13, 2012 – Siyaasiyiin iyo xildhibano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay in Mahiga uu caqabad ku yahay xalka Soomaaliya kuna Baaqay in la dhigo Banaanbax ka dhan ah.
Siyaasiyiin aqoonyahano iyo Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta isugu yimid Muqdisho ayaa waxay si aad ah u dhaliileen Siyaasadda Ergayga gaar ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Augustine Mahiga u ku maamulayo wadanka Soomaaliya Waxayna Sheegeen inuu hortaagan yahay nabad iyo horumar uu gaaro dalka. Xasan Sheekh oo ah guddoomiyaha xisbiga Siyaasiga ee Nabadda iyo horumarka ayaa ka mid ah dadkii goobta ka hadlay.
Xasan Macallin Wasiir Dowlihii hore ee Madaxtooyada iminkana xubin ka ah Madasha Daljir ayaa dhibaato kasta oo Soomaaliya gaarta ku sifeeyay inay u wacan tahay Midnimo la’aanteeda. Xildhibaan C/raxmaan Jaamac oo goobta ka hadlay ayaa dhankiisa ka dhawaajiyay in Mahiga uu sawir qaldan ka gudbiyay Baarlamaanka KMG Soomaaliya.
Ugu Dambayn Sheekh Axmed Dhicisow guddomiyaha Majmaca Culumada Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay dibadbax looga soo horjeeda Mahiga oo ay Iclaamiyeen Masuliyiintii Maanta kulmay. waxaa jira dhaliilo iyo eedeymo isdaba joog ah oo qeybaha kala duwan ee bulshada u jeedinayaan Mahiga tan iyo markii qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida baahiyeen Wareysi uu Mahiga ku sheegay in Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ay la wareegeen dad uu ku tilmaamay Aala Sheekh taa oo dhalisay inay si isku mid ah kaga hadlaan Madaxda Dowladda iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada.